Faahfaahin Qarax Khasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Khasaaraha ka dhashay Qarax loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay walxaha Qarxa oo la dhigay Maqaaxi laga cunteeyo oo ku taala kasoo horjeedka Wasaaradda dhalinyarada iyo Cayaaraha oo lagu magacaabo Italian.
Inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa ku dhimatay Qaraxaasi , waxaana sidoo kale jira dhaawacyo badan oo soo gaaray dadka wadada Maraayay madaama goobtu uu Qaraxu ka dhacay tahay waddo ay dadweynuhu Isticmaalaan.
Waxaa sidoo kale goobjoogayaal ay Risaala u sheegeen in dad badan 10 qof ay ku dhaawacmeen Qaraxaasi.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo gaaray goobta uu Qaraxu ka dhacay ayaa dhammaan xiray wadooyinka soo gala Maqaayadda uu Qaraxu ka dhacay.
Goobta uu Qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ku yaalla Wasaado muhiim ah Sida Wasaaradda Amniga dowladda Soomaaliya.
Sawirro laga soo qaaday goobta uu Qaraxu ka dhacay ayaa waxa ay muujinayaan Meydad badan oo yaalla Iridda Hore ee Maqaayadda.
Waxaa sidoo kale ay Sawirradaasi ay muujinayaan Burbur Xooggan oo gaaray Maqaayadda Italian Coffe iyo sidoo kale Dhismayaasha ka Agdhow.
Qaraxaan ayaa yimid ayadoo Mas’uuliyiinta Wasaaradda Amniga Soomaaliya ay Shalay ku dhawaaqeen Qorshe loogu magacdaray Xasilinta Caasimadda.
Sanadyadii lasoo dhaafay ayaa Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay We’ve got the best solution for your cytotec purchase! Why? Just because you can buy it only for 2.41 USD with us! Qaraxyo ay Mas’uuliyadooda ay sheegtaan Al-Shabaab.